Tababarka Xirfadleyda Caafimaadka - taariikhaha cusub ee Scotland ayaa lagu dhawaaqi doonaa bisha Luulyo. - Hay'adda Abaalmarinta
Tababarka Xirfadleyda Caafimaadka - taariikhaha cusub ee Scotland ayaa lagu dhawaaqi doonaa bisha Luulyo.
Sanadihii hore 10, sawir-gacmeedka internetka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqankayaga iyo dabeecadaha galmada. Cilmi-baaristu si tartiib tartiib ah ayey ula qabsadaa. Hase yeeshee, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waxay arkayaan kor u kac weyn oo bukaannada iyo macaamiisha leh xaalado porno la xiriira. Maxkamadaha Sharciga ah waxay ku xayiran yihiin xad-dhaafka dembiyada galmada. Dugsiyadu waxay arkayaan dabeecado badan oo galmo ah iyo dhacdooyin u muuqda in ay carqaladeeyaan isticmaalka fara-xumeynta carruurta.
Hay'adda Reward Foundation waxay soo saartey aqoon-is-weydaarsi hal maalin ah oo ay ku qoreen College College of Practitioners. Tababarka waxaa lagu iibiyaa "Pornography Internet - Saameynta iyo isdhexgalka galmada maanta?"Waa arrin u qalma 7 horumarin xirfadeed oo joogto ah (CPD). Waxay fiirinaysaa cilmi-baarista iyo hababka ugu wanaagsan ee saameynta lidka-ficilka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jirka. Siminaarradan waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada xirfadleyda oo ay ka mid yihiin GP-yada, dhakhaatiirta maskaxda, qareennada, kalkaaliyayaasha iyo daaweeyayaasha jinsiga. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dhakhtarka maskaxda, lataliyayaasha xiriirka, agaasimaha HR, macallimiinta, shaqaalaha dhalinyarada iyo hoggaamiyeyaasha diinta.
Kulankan hal-abuurka ah ee wada-shaqeyntu wuxuu soo bandhigi doonaa baaritaankii ugu dambeeyay ee ku saabsan isticmaalka qaswadayaasha internetka. Waxay ka hadli doontaa dib-u-eegista ugu dambeysa ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Qeybaha Caalamiga ah ee Cudurrada (ICD-11). Tani waxay faahfaahin ka bixisaa qaybta "diagnosticic category" ee "khalkhal galmo jismi ah".
Waxaanu eegi doonaa noocyo kala duwan oo caafimaadka jirka ah iyo xaaladaha caafimaadka maskaxda ee la xiriira isticmaalka sigaarka iyo ikhtiyaarka daaweynta. Wax walba waxay ku saleysan yihiin caddaynta sayniska ugu dambeysa. Waxaan ku dhiirri-galineynaa wada-hadallo dhex-dhexaad ah oo ku saabsan xirfadlayaasha ugu fiican. Waa muhiim in la ogaado sida loola macaamilo macaamiisha iyo dadka isticmaala, iyo sida doorashooyinka soo kabashada calaamadaha. Dhammaan dadkii soo xaadiray waxay heli doonaan nuqul ka mid ah daabacaaddii ugu dambeysay ee buugga 'Gary Wilson'Maskaxdaada on Porn'.
09.30 - Horudhaca sawir-gacmeedka internetka iyo Tijaabinta Porn Porn. Ururka Caafimaadka Adduunka ee qeexidda caafimaadka galmada. Hababka daroogada iyo moodooyinka maskaxda, astaamaha habdhaqanka qofka iyo arrinka korodhsiinta alaabta xooggan.
11.00 - Fasax
11.15 - Isticmaalka sawir-gacmeedka iyo halista - dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo jirka. Dhibaatooyinka galmada ee dhalinyarada, ragga iyo dumarka. Wadahadal koox yar, weydiinaya macaamiisha isticmaalka filimmada, ka dibna wadahadal kooxeed. Nidaamka isticmaalka qaan-galka, jinsi-dajinta iyo isbedelka hab-dhaqannada jinsiga ah ee bulshada. Waxaan sidoo kale ka hadli karnaa arimaha caafimaadka maskaxda iyo xadgudubka jinsiga ilmaha ee cunuga-ku-jira. Ka dib waxaan u dhaqaaqeynaa dhibaatooyinka jinsiga ah ee kufsiga iyo doorka lidka sawirada ee rabshada guriga. Kulanka S iyo A.
13.00 - Qadada
14.00 - Isticmaalka Pornography iyo arrimaha kala duwanaanshaha jinsiga, tijaabinta dhibaatooyinka isticmaalaha iyo bixinta khayraadka si loo taageero adkeysiga. Pornography oo ah arrin hab nololeed oo ku saabsan bulshooyinka LGBTQI + iyo MSM, isku-duubnida, jimicsiga, ikhtiyaarka daaweynta, Cabirka Dhibaatada ee Isticmaalida Iskuduwaha, bulshooyinka dib u soo kabashada iyo qorista bulshada. Wadahadal kooxeed.
15.30 - Fasax
15.45 - Soo noqoshada iyo ka-hortagga - Muuqaal intee le'eg ayaa ka badan? Daaweynta iyo fursadaha waxbarasho. Maxay yihiin saameynta ay qabatimay, ka bixitaanka iyo 'ujeedka'. Sida loo isticmaalo dareenka, CBT, daaweynta daroogada iyo dhisida fahamka pornography internetka ee ku jira dhaqtarkaaga
16.50 - Qiimeynta iyo dhow.
Nagala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan goobaha iyo dhacdooyinka mustaqbalka info@rewardfoundation.org. Haddii kale, naga soo wac + 44 (0) 131 447 5401 ama + 44 (0) 7506 475 204. Waxaan sidoo kale bixin doonaa seminaaro ku-meel-gaar ah si ay u siiyaan tababaro qiimo-jaban oo loogu talagalay ururrada iyo hay'adaha waaweyn.